Norway: Tirada haweenka singelka ah ee raba in lga caawiyo inay uur qaadaan oo soo badaneyso. - NorSom News
Baarlamaanka Norway ayaa sanadkan ogolaaday in isbadal lagu sameeyo sharciga taranka iyo tiknooliyada la xiriirta, waxaana la ogolaaday in haweenka kaligood nool(Singel-ka ah) laga caawin karo inay yeeshaan/qaadaan uur, iyada oo la adeegsanayo biyaha ragga oo meel lagu keydiyay.
Horey wuxuu sharciga Norway u ogolaa oo kali ah in labada qof ee wada-degan, isqaba ama saaxiibka ah(Forhold) ee caruur dhali waayay, laga caawiyo in gabadhu ay uur qaado, iyada oo la adeegsanayo biyaha shahwada ragga oo la keydiyay. Balse baarlamaanka Norway ayaa sanadkan sidoo kale ogolaaday in haweenka kaligood nool ee dhalmo-doonka ah laga caawiyo inay uur-yeeshaan, hadii ay iyagu codsadaan ama rabaan.
Isbitaalada arrintan ka shaqeeyo ayaa sheegay inay si aad ah usoo korortay tirada dumarka kaligood nool ee rabba in laga caawiyo inay uur-qaadaan, waxeyna sheegeen in liiska sugitaanku(venteliste) uu si aad ah kor ugu kacay isbuucyadii lasoo dhaafay. Waxeyna sheegeen inay ku rajo qabaan inay helaan ragg badan oo Norwiiji ah, kuwaas oo biyahooda ku deeqo, si haweenka dhalmodoonka ah uur loogu yeelo.
Ururka ay ku mideysanyihiin haweenka dhalmo-doonka ah ee Norway, ayaa sheegay inay jiraan haween badan oo dhalmo doon ah, kuwaas oo caawin aan ka helin isbitaalada Norway ama la galiyo saf dheer oo sugitaan ah.
Xigasho/kilde: Mange enslige kvinner ønsker hjelp til å få barn
Previous articleKeshvari oo hadana ku eedeysan inuu biskoolad ugu hanjabay ex-tiisii hore.
Next articleSweden: Hindise la rabo in lagu dhimo tirada ajaaniibta qaadaneyso baasaboorka Sweden.